Tag: Jeriko | Martech Zone
Mkpado: ndị na-ere ahịa
Tọzdee, Nọvemba 16, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ndị na-agbazinye ego na-akwado ịkwado ụlọ ọrụ na-ere ahịa ugbua. Bloomberg na-ebu amụma amụma ahịa ahịa nwere ike ịbịakwute anyị ngwa ngwa. Lọ ahịa mkpọsa na-agụ agụụ maka ihe ọhụrụ, na andntanetị nke Ihe nwere ike inye mmụba dị mkpa. N'ezie, 72% nke ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ ugbu a na Enterprise Internet of Things (EIoT). Ọkara ndị na-ere ahịa niile etinyelarị teknụzụ dị nso na azụmaahịa ha. Gịnị bụ EIoT? N'ime ụlọ ọrụ taa, ịba ụba
Wednesday, December 14, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Curt oge ntoju
N’oge na-adịbeghị anya, elere m vidiyo nke onye njikwa Target na-eguzo n’elu ebe ndenye ọpụpụ ya, na-agwa ndị ọrụ ya okwu na-akpali akpali tupu imepe ọnụ ụzọ ndị ahịa Black Friday, na-achịkọta ndị agha ya dị ka a ga - asị na ọ na - akwado ha maka agha. Na 2016, nsogbu ahụ bụ Black Friday buru ibu karịa mgbe ọ bụla. Agbanyeghị na ndị na-azụ ahịa jiri ihe dị ka $ 10 pere mpe karịa ka ha mere n'afọ gara aga, e nwere nde mmadụ atọ ndị ọzọ Black Friday na-azụ ahịa na 2016 karịa na
Ọnụ ọgụgụ ahụ karịrị akarị na ndị na-azụ ahịa na-akwụkwu ụgwọ ma soro ndị ụlọ ọrụ na-enye nnukwu ahụmịhe ọrụ na nkwukọrịta ka ukwuu. Ozi ederede abanyela n'otu n'ime usoro nkwukọrịta zuru ụwa ọnụ nke ndị na-ere ahịa na-ebugharị iji melite ahụmịhe ndị ahịa na ịnya ego. Akwụkwọ akụkọ OpenMarket na-ezigara Retail Mobile Messaging Report nke Onye na-ere ahịa na conductedntanetị na-eduzi na-adịbeghị anya, gbara ndị ọkachamara na-ere ahịa e-azụmahịa 100 ajụjụ banyere ojiji ha na-ezipụ ozi SMS maka itinye aka na ndị ahịa. SMS enweghị nsogbu ịnweta